Netflix vs Hulu (2020) - Ny ady fampitahana - Fialam-Boly
Ny vanim-potoanan'ny fampiharana mivantana dia mahatratra ny tampon'isa ankehitriny. Saika ny orinasa rehetra dia mampiasa vola amin'ny fampiharana streaming. Manana streaming mivantana amin'ny fahitalavitra mivantana ianao, atiny voalohany, mozika, radio, eny fa na ny fampiharana sakafo aza dia manambola amin'ny serivisy mivantana. Na izany aza, amin'ity hazakazaka ity dia tsy azonao atao ny tsy mijery ireo goavambe roa.
Netflix vs Hulu dia adihevitra efa ela. Betsaka ny olona misafotofoto eo amin'ny fanapahana ny fampiharana izay tsara kokoa ho azy ireo. Noho izany, eto no ahitanao ny famerenana amin'ny laoniny feno izay mampihena ny fanenjehana ary mitondra anao ny fampahalalana marina.
Tsy misy intsony ny tombana amin'ny fanitarana, fampiasam-bola, vidiny ary endri-javatra hafa. Momba ny fanamorana ny mpampiasa sy ny fialan-tsasatra entin'ny fampiharana. Izay no tena mahomby amin'ny fampiharana. Ny atiny sy ny fialamboly no zava-dehibe indrindra. Andao àry hanomboka ity adin'ireo goavambe ity!
Netflix vs Hulu - Fampitahana tsara indrindra
Hulu dia misy any Etazonia ihany. Noho izany dia tsy maintsy mampiasa VPN ianao raha te hiditra amin'ny Hulu avy amin'ny firenena sy faritra hafa. Na izany aza, ny Netflix dia tsy mitsaha-mivelatra ary misy amin'ny firenena marobe.
Netflix dia mitondra anao atiny voalohany, ary koa atiny eo an-toerana. Na izany aza, midika koa izany fa miankina amin'ny faritra ny fisian'ny atiny ao amin'ny Netflix. Noho ny zon'ny sasany fahazoan-dàlana sy ny fepetra takiana hafa dia mety tsy misy ny atiny sasany ao amin'ny faritra misy anao.
Na izany aza, raha mijery izany ianao, dia raha ny amin'ny fidirana sy ny fahafahan'ny isam-paritra dia mihoatra an'i Hulu i Netflix. Na izany aza, raha azonao atao ny mametraka ny tananao amin'ny fahatokisana VPN serivisy, avy eo azonao atao ny miditra amin'ny Hulu na aiza na aiza tsy misy olana.
Netflix vs Hulu - fampifanarahana fitaovana
Samy manohana fitaovana marobe ny Netflix sy i Hulu. Manohana ny sehatra iOS, Android, Windows, ary sehatra hafa izy ireo. Azonao atao ny mampiasa azy ireo amin'ny telefaona finday, Takelaka, fahitalavitra mahomby, solosaina finday, ary solosaina manokana. Hulu sy Netflix dia azo alaina ao amin'ny console lalao malaza. Na izany aza, eto no misy an'i Hulu mihoatra ny Netflix.
Hulu koa dia misy amin'ny sehatra Nintendo, indrindra ny Switch. Nintendo Switch dia nahazo laza malaza, indrindra any Etazonia. Ka io fahafaha-manao io dia azo antoka fa mety amin'ny mpampiasa.
Netflix vs Hulu - Adin'ny atiny
Raha miresaka momba ny atiny ianao dia fantatra fa manome atiny voalohany i Netflix. Mampitombo hatrany ny teti-bolany hampiasa vola amin'ny atiny omena azy. Tamin'ny taona 2020, nandoa vola $ 17 tapitrisa Miliara i Netflix hanolorana atiny premium sy premium ho an'ireo mpampiasa.
Misy seho sy sarimihetsika malaza maro azo jerena manokana ao amin'ny Netflix izay tsy ho hitanao na aiza na aiza. Netflix dia nahavita namorona akany manokana. Izy io dia mahatafiditra sarimihetsika malaza sy fandaharana amin'ny fahitalavitra. Na izany aza, miady ny Netflix hahazoana ny zon'ny ankamaroan'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika.
Vao tsy ela akory izay, Netflix dia miasa amin'ny fanomezana ny atiny Anime manaitaitra mba hahazoana tombony amin'ny fifaninanana amin'ireo fampiharana mivantana hafa. Azo antoka fa milalao azy io. Na izany aza, ny anime tany am-boalohany an'i Netflix dia tsy dia ankafizina loatra toy ilay tena anime avy any Japon.
Etsy ankilany, Hulu dia mitondra anao ny ankamaroan'ny atiny azo jerena voalohany amin'ny fantsom-pahitalavitra. Izy io dia manana zon'ny NBC, ABC, Fox, HBO, ary fantsona fahitalavitra malaza hafa hanolotra atiny. Azonao atao ny mizaha ary Alefaso ireo seho TV tianao indrindra sy ny sarimihetsika tsy misy famerana. Hulu dia manolotra ny andiany andiany voalohany, saingy tsy mahomby toa ny atiny malaza hafa izy ireo.
Netflix vs Hulu - TV mivantana & Add-On
Tsy manome fonosana fanampiny na Live TV i Netflix. Eto no tena mampiavaka an'i Hulu. Raha nahatratra ny fanjakany tamin'ny alàlan'ny atiny tena tsara tany am-boalohany i Netflix, manjaka kosa i Hulu amin'ny alàlan'ny fanomezana fahafaha-manao ho an'ireo mpampiasa.
Afaka miditra amin'ny fantsom-pahitalavitra mivantana ianao, ary i Hulu dia manana tahiry marobe amin'ireo fantsona ireo. Ny famandrihana azy dia mamela anao misintona (soloina rakipeo) atiny amin'ny fantsom-pahitalavitra sy sarimihetsika sasany . Ho fanampin'izay, misy be dia be ny Add-on ho anao toa Starz, HBO, ary fantsona hafa.
Amin'ny fampidirana ireo famandrihana ireo dia hitahiry vola be ianao, ary tsy ilaina intsony ny mampidina ireo fampiharana ireo. Hulu dia niara-niasa tamin'ny mpanome tolotra streaming toa anao Disney , ESPN, sy ny hafa hanome anao drafitra famandrihana mety kokoa ho Add-ons sy Live TV.
Ity safidy avy any Hulu ity dia azo antoka fa mametraka ligy ambonin'ny Netflix, raha ny resaka hazakazaka atiny no jerena. Na izany aza, mbola tsy afaka mifanaraka amin'ny kalitaon'ny atiny izay fantatra amin'ny Netflix. Azonao atao mihitsy aza ny milaza fa amin'ny resaka atiny, fantsona mijoro irery i Netflix ankehitriny.
Netflix vs Hulu - Kalitaon'ny atiny
Samy afaka manohana atiny HD na Netflix na Hulu. Samy manolotra famaritana mahazatra ho an'ny drafitra fototra ahafahan'izy ireo manova azy amin'ny alàlan'ny drafitra tsara kokoa. Na izany aza, Hulu dia misy atiny sy sarimihetsika kely kokoa hita ao amin'ny 4K Ultra HD.
Mandritra izany fotoana izany, Netflix dia manolotra atiny 4K Ultra HD miaraka amin'ity drafitra Premium azonao ampiasaina amin'ny fitaovana ity. Ny tena zava-dehibe dia misy amin'ny 4K HD ny atiny rehetra. Ka raha olona tia kalitao madiodio ianao dia mety nandresy ity fihodinana ity i Netflix.
Netflix vs Hulu - Drafitra sy fitsapana amin'ny famandrihana
Ny drafitra voalohany sy mora indrindra an'i Hulu dia misy doka. Tsy misy fomba ahafahanao mandingana azy ireo, ary ireo dokambarotra ireo dia afaka manilika ny zavatra niainanao. Eto no miavaka ny Netflix satria tsy misy endrika dokambarotra na inona na inona.
Hulu sy Netflix dia afaka manolotra anao handehandeha any amin'ny fitaovana roa miaraka amina drafitra mety. Na izany aza, raha mandinika ny vidiny ianao, dia tena lafo vidy kokoa i Hulu noho i Netflix.
Na izany aza, amin'ny fotoana maharitra, miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana marobe, mety ho fampiasam-bola lafo vidy izany satria mampihena ny fepetra takiana amin'ny fisian'ny fampiharana be loatra amin'ny findainao. Ary tsy hanana famandrihana be loatra ianao hanarahana ny lisitry.
Netflix dia tsy manome fanandramana na famandrihana maimaimpoana intsony ho an'ireo mpiaro azy. Mandritra izany fotoana izany, Hulu dia misy fitsarana maimaim-poana mandritra ny 30 volana ho an'ny drafitra roa voalohany. Ho an'ny Hulu + Live TV, ianao dia hitsarana fito andro. Azonao atao ny manapa-kevitra raha te hisoratra anarana amin'i Hulu ianao amin'ny ho avy na tsia. Io dia mametraka an'i Hulu alohan'ny Netflix.
Netflix vs Hulu - Ny didim-pitsarana farany
Mandresy amin'ny loko manidina i Netflix raha mieritreritra ny hatsaran'ny votoatin'ny originality sy ny fahafaha-mitana faritra sy firenena maro manana 4K HD sy mifanentana amin'ny rehetra ianao. Izy io koa dia mora vidy kokoa noho ny famandrihana nataon'i Hulu. Na dia tsy misy fitsapana aza, nahazo fankasitrahana i Netflix tamin'ny fanomezana atiny lehibe. Araka izany, ny olona misimisy kokoa ny hisoratra anarana, ary ny drafitra fototra dia mora vidy tokoa.
Na izany aza, raha tianao ny Live TV na te-hisoratra anarana amin'ny fampiharana streaming hafa ianao, saingy amin'ny sehatra azo atao, dia mety hanaporofo fa mpandresy i Hulu. Na eo aza izany dia tsy afaka mijery ny zava-misy ianao fa ny Hulu dia tsy misy afa-tsy any Etazonia ihany. Manolotra dokam-barotra ho an'ny drafitra ifotony ihany koa izy io. Hulu dia tokony hametraka avo lenta ny lalao satria ny zava-drehetra ho azy dia ny manampy ny endri-javatra sy ny fahitalavitra mivantana indrindra.
Misy maro hafa fampiharana mivantana sy mpanome tolotra izay manolotra Live TV amin'ny sehatra azo tanterahina. Youtube TV dia iray amin'ireo ohatra misongadina. Araka izany, amin'ny fotoana maharitra, ary raha tsy mampaninona anao ny manampy fampiharana roa na maromaro amin'ny fitaovanao, mpandresy mazava i Netflix.
HBO Ankehitriny fihenan'ny mpianatra
Vanim-potoana faha-6 amin'ny Peaky Blinders: Izay rehetra fantatsika hatreto
Our Girl Season 5 | Sarin'ny tohiny rehetra
Inona no lanjan'i Jake Paul amin'ny taona 2022?
Mushoku Tensei Season 3: Daty Famoahana: Tetika, izay rehetra tokony ho fantatrao!
Hisy ve ny vanim-potoana faha-3 Noragami: Inona no fantatsika momba ny datin'ny famoahana?
Inona ny hafainganam-pandehan'ny Internet ilainao amin'ny orinasanao
Ny famotsorana an'i God of War Ragnarok tamin'ny 2022 dia nohamafisin'ny PlayStation [Antsipirihan'ny antsipiriany]
Nahoana ianao no tokony hijery Modern Love Season 2?
Imp of the Sun - Mpanamboatra hetsika 2D tsy misy tsipika miaraka amin'ny endrika miavaka
rindrambaiko famonoana studio maimaim-poana
no anaranao ao amin'ny crunchyroll
olona firy no afaka mandefa disney plus
mihetsika tsara daholo ny mihetsika amin'ny Internet
lalao ios amin'ny emulator android
sarimihetsika feno azo antoka amin'ny Internet maimaim-poana
fanaovana kapoka amin'ny tarika garazy